2012-10-07 07:53:52 | मेरो सिन्धु
उनी त्यो दिन साथीकै घरमा बसेकी थिइन् । बेलुका साथीको आमाले उनको आमाको बारेमा निकै कुरा सोधिन् । तर उनी भने यो बिषयमा धेरै कुरा गर्न चाहिरहेकी थिइनन् । साथी निदाइसकेपछि पनि उनलाई निकै समय निन्द्रा लागेन । आमाको सम्झना छाती नै चिर्नेगरी आइरह्यो र आँखाबाट निकैबेर आँशु रोकिएन ।
उनकी आमा जनयुद्धकालमा बेपत्ता भएकी थिइन् र पछि हल्ला सुनिन् – उनकी आमा भैरवनाथ गणमा परेकी थिइन् । उनकी आमा उनलाई छोडेर जनयुद्धमा हिड्दा उनी केवल ७ बर्षकी थिइन् । मामाघरमा बसेर पढ्दाताका कोही साथीहरुले उसलाई सोध्थे –‘तेरो आमा माओवादीमा हिंड्या हो ?’ उनलाई त्यसबेला माओवादी भनेको के हो थाहा थिएन । उनलाई आमाले मामाघरमा ल्याएर भनेकी थिइन् –‘ल छोरी यहीं बसेर पढ । मामु विस्कुट लिएर आउँछु नि है बेलाबेलामा ।’ उनले त्यतिखेर बिस्कुट लिएर आउँछु भनेकी आमालाई कहाँ जान लागेकी भनेर पनि सोध्न सकिनन् । र, आमा विस्कुट लिएर पनि कहिल्यै आइनन् ।
पछि ठुली हुँदै गएपछि उनले कसैबाट सुनिन् – उनकी आमालाई सेनाले भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पार्‍यो । तर उनलाई विस्वास लागेन, किनकि उनलाई अझै पनि आमाकै कुरामा विस्वास थियो । ‘छोरी धेरै ढिला भयो है’–भन्दै आउँछिन् भन्ने विस्वासमा थियो उनको मन ।
एसएलसीको परीक्षा सकेर नतिजा कुर्न कम्प्युटर सिक्न जाँदा उनले इमेल इन्टरनेट पनि जानिन् । इन्टरनेटमा समाचार पढ्ने क्रममा एकदिन अनलाइनमा बिद्यार्थी नेता हिमाल शर्माको अन्तरवार्ता पढेपछि उनलाई आमाको सम्झनाले यसरी नै सताएको थियो र आतंकित भएकी थिइन् ।
अन्तरवार्तामा हिमालले भनेका थिए –‘सैनिकहरु मुख्य गरी अधिकृतहरु महिला बन्दीमाथि बलात्कारलाई आफ्नो हक मान्दा रहेछन् । ०६० मंसिरको अन्तिम हप्तातिरको कुरा हो । वाइबा नाम गरेकी एकजना महिलालाई तेह्रजना सैनिकले बलात्कार गरेको मैले आफ्नै आँखाले देखेँ । त्यसमा कर्नेल राजु बस्नेत पनि थिए । उनी मलाई राखिएको ठाउँभन्दा पाँच मिटर मात्र टाढा थिइन् । वाइबाको आठ महिनाको गर्भ थियो । उनले ‘पहिले बच्चा जन्माउन देऊ, त्यसपछि चाहेको गर’ भनेर गर्नुसम्म हारगुहार गरिन् । यति हुँदाहुँदै पनि सैनिकहरले ‘हामी अहिल्यै जन्माइदिन्छौं’ भन्दै बलात्कार गरिरहे । नभन्दै दुई घन्टापछि एउटा मरेको बच्चा जन्मेछ । छोरी रहिछ । ती महिलाको यातनाका कारण भोलिपल्टै मृत्यु भयो । त्यसपछि कर्नेल बस्नेत आएर ‘जहाँ मरेकी छ त्यही खाल्डो खनेर पुरिदे, कसैले केही गर्ने वाला छैन’ भन्दै गए । र, ती महिलालाई त्यही पुरियो । हामीलाई पनि साङ्लोमा बाँधिएको थियो र पछाडिबाट हात बाँधिएको थियो । अरु बेला हाम्रो आँखामा पट्टी बाँधे पनि यातना दिने समयमा भने खोलिन्थ्यो, आतंकित पार्न । उनीहरुले १५, १६ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका महिलालाई पनि छाडेनन् ।’
बिहानीपखमात्रै उनका आँखा लागे ।
‘उनी एनएसीअगाडि टेम्पो कुरेर बसिरहेकी थिइन् । त्यसैबेला सैनिकहरु चढेका घोडाहरु टाप बजार्दै आए । जसको बीचमा निकै सजिएको एउटा रथ थियो । उनलाई निकै जिज्ञासा लाग्यो र अलि नजिक गइन् । जब उनी नजिक गइन्, तब उनी तर्सेर आँखा छोपिन् । रथमा एउटा सैनिक थियो, जसले पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको महाकालीले जस्तै ४९ जना मानिसहरुको टाउकोको माला लगाएको थियो । जसमा उनको आमाको टाउको पनि थियो । उनले सम्हालिएर आँखा खोल्दा रथ अगाडि बढिसकेको थियो र त्यसको पछाडि प्रधानमन्त्री चढेको अर्को रथ थियो, प्रधानमन्त्री मुसुमुसु हाँस्दै अगाडिको रथमा फूलको पत्ताहरु छरिरहेका थिए । उनलाई अब भने डर होइन, आक्रोशले सीमा नाघ्यो । उनलाई प्रधानमन्त्रीको रथमा चढेर उनको मुखभरी थुक्न मन लाग्यो, कोपर्न मन लाग्यो उनलाई । उनी रथतिर बत्तिइन् । तर सैनिकहरुले उनलाई च्याप्प समाते ।’
उनी व्युँझिइन्, उनलाई साथीले पाखुरामा समाउँदै झिंगोलिरहेका रहिछन् । उनी तर्सिएजस्तै व्युँझिएपछि साथीले सोधिन् – ‘के भो सपना तँलाई ? किन यसरी छट्पटाएकी ? हेर् त निधारभरि चिट्चिट् पसिना छ ।’
‘ओहो मैले के सपना देखेको हुँला ?’ – उनले सोचिन् । उनलाई सामान्य हुन दश मिनेटभन्दा बढी लाग्यो ।
आज ‘भैरवनाथ गणका तत्कालिन गणपति बस्नेतको बढुवा’ शिर्षकको समाचार पढेपछि उनलाई सपनामा होइन, विपनामै प्रधानमन्त्रीलाई चिथोर्न मन लागिरहेको छ । उनको मन काममा रुपान्तरण हुने हो भने बाबुराम कहाँ पुग्ने हो, उनको पार्टी कहाँ पुग्ने होला ? म सोचिरहेछु ।